Iindaba-Isilivere yobuso be-antibacterial mask
Ngaphantsi kwemvelaphi yeCovid 19, abantu kufuneka bazikhusele ngokunxiba imaski yobuso kunye neiglavu. Eyona ndlela isebenzayo kufuneka inxibe iimaski. Siphonononge imaski yobuso yesilivere enokubulala iintsholongwane ezosuleleke ngumatshini wokuphefumla, inokuxhathisa i-99.9% yentsholongwane ye-HIN1. UGqirha JinJian Fang ucebisa ukuba ithathele ingqalelo ii-ions zesilivere njengenye yeendlela zokhuselo kunye nonyango lwee-coronaviruses ezintsha.
Eyona nto iphambili:
- i-antibacterial: inokuthintela i-99% yegolide staphylococcus, klebsiella pneumoniae, HIN1
-Iphinda isetyenziswe kwaye ihlambeke: inokuhlanjwa ngaphezulu kwamaxesha ayi-100
-ukususa ukunganyangeki: i-antibacterial yesilivere, umsebenzi wokuphelisa ukungaphelisi unokuphelisa ivumba elibi
Ukufunxwa kokufuma kunye nokubila kukhulula: umaleko wangaphakathi womqhaphu, i-viscose njl.njl ingagcina yomile kwaye iphephe ukuziva ukufuma
Ixesha Post: Oct-26-2019